» दु:खद खबर! सरिता श्रेष्ठ ,जस्ले आफुले जन्म दिएको बच्चाको अनुहार देख्न नपाइ संसार बाट बिदा भइन! भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली , दु:खद खबर! सरिता श्रेष्ठ ,जस्ले आफुले जन्म दिएको बच्चाको अनुहार देख्न नपाइ संसार बाट बिदा भइन! भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली , – हाम्रो खबर
दु:खद खबर! सरिता श्रेष्ठ ,जस्ले आफुले जन्म दिएको बच्चाको अनुहार देख्न नपाइ संसार बाट बिदा भइन! भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली ,
उदयपुर, कार्तिक २१। भोजपुर आमचोक ९ की सरीता श्रेष्ठलाई बच्चा जन्मिने मिति यही कार्तिक २२ गते दिएका थिए चिकित्सकले । उनी लकडाउ हुनु अघि सम्म उदयपुरमा बसेर कक्षा १२ मा अध्ययन गर्दै आएकी थिईन् । तर लकडाउन पछि आमचोक स्थित आफ्नो घर गएकी थिईन् । श्रीमान् कृष्ण श्रेष्ठ प्रहरी सेवा रहेकाले फोनबाटै सम्पर्क गर्ने गरेका थिए ।
असोजको अन्तिम सातातिर सरीता आफ्नो माईतीघर आमचोक ८ दिङलापु गईन् । त्यस पछि कार्तिक पहिलो साता आईन् । त्यस पछि उनलाई सामान्य टाउको दुखेको जस्तो भएको परिवारलाई जानकारी दिईन् । गर्भाअवस्थामा चिकित्सकको परामर्श विना औषधी र उपचार कठिन हुने भएकाले ससुरा दल बहादुर श्रेष्ठले गाडीमा हालेर धरान स्थित विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पुर्याए ।
त्याहाँ केही ज्वरो समेत आउन थाल्यो । चिकित्सकहरुले निमोनियाको आशंका गरे । कोरोनाको पनि पटक पटक परीक्षण गरियो तर उनको रिपोर्ट नेगेटिभ नै आयो ।
यसरी उपचार गर्दा गर्दै उनको अवस्था त्यति जटिल थिएन । कार्तिक ६ गते उनले विना अप्रेसन सामान्य अवस्थामै छोरी जन्माईन् ।
विरामी अवस्थामै भए पनि उनी खुसी नै भईन् । परिवारमा सकुसल सन्तान जन्मिदा खुसी हुने नै भए । त्यसबीचमा आफन्तहरु आउने जाने, रेखदेख गर्ने भईरहेकै थियो । बच्चा जन्मिए पछि सरीताको रक्तचाप न्युन भएको चिकित्सकहरुले सुझाए ।
शिसुलाई नर्सहरुले ल्याक्टोजिन खुवाएर छुट्टै राखेका थिए । शिसुको स्वास्थ्य राम्रो छ । तर सरीताले छिट्टै निको भएर आफ्नो सन्तान काखमा राख्ने चाहना राखिरहेकी थिईन् । स्वास्थ्य र उपचार पद्धतिले गर्दा त्यो संभव भएको थिएन । विस्तारै चिकित्सकहरुले सरीताको प्रेसर नबढेको र फोक्सोमा समस्या रहीरहेको भन्दै अनेकौ परीक्षणहरु गरे ।
त्यस पछि पनि झन सारो हुँदै गए पछि उनलाई भेन्टिलेटरमा हाल्न सुझाव दिए डाक्टरहरुले परिवारलाई । सोही बमोजिम भेन्टिलेटरमा हालियो । त्यस पछि फेरी केही सुधार भएको भनेर प्रतिष्ठानको सर्जिकल आईसियुमा सारीयो ।
दुई दिन अघि उनलाई अण्डा जुस, खुवाए नर्सहरुले । मेडिकलका हिशाबले सबै स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको भनेर भनियो । तर पनि सरीताको शारीरीक प्रतिकृयालाई हेर्दा सुधार थिएन ।
यही बीचमा चिकित्सकहरुले बिहिबार मृगौलामा पनि समस्या भएको भन्दै बचाउन मुस्किल पर्ने बताए । थप उपचार गर्दा गर्दे कलिलै उमेरमा सरीताले आज बिहान करीब ६ बजेर २५ मिनेटमा संसार छाडेर गईन् । उनले आफैले जन्म दिएको सन्तानलाई अंकमाल गर्न पाईनन्, काखमा लिन पाईनन् ।
सरीताको कोखबाट जन्मिएको शिसुको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको पारीवारीक स्रोतले जनाएको छ । कार्तिक ६ गते जन्मिएकी छोरीलाई अहिले सरीताकी दिदीले उदयपुर बेलका स्थित आफ्नो घरमा राखेर गाईको दुधको भरमा हुर्काईरहेकी छन् ।
यसैबीच, स्वर्गीय सरीताको आजै सप्तकोशीमा लगेर अन्त्यष्टी गर्ने तयारी भएको पारीवारीक स्रोतले जनाएको छ ।